Ku soo jiidashada Yurub ee Cer jillaab | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulWaxay u jiidataa Europe oo leh jilbaha garabka
Waxay u jiidataa Europe oo leh jilbaha garabka
07 / 03 / 2015 34 Istanbul, hawlaha, GUUD, Headline, TURKEY
Shirkadda Cer waxay soo jiidataa Yurub: Kanca A.Ş waxay heshay macaamiil muhiim ah qeybta tareenka. Gaar ahaan meesha ay ku taal halka wax soo saarista xarigga loosoo gaabiyo, 20inkasta oo uu la kulmo. Shirkadda, JarmalkaCarwooyinka aan lagaraneyn ee gudaha magaalada Berlin, ee ku yaal wadooyinka-xamuulka-shilalka xamuulka qaada, ayaa muujisay suumanka soo-jiidashada wax soo saarka ee Hook.
Iyada oo tikniyoolajiyadeedu sare u kacsan tahay, Kanca waxay noqotay mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee iibiya alaabooyinka soosaarayaasha ugu waawayn adduunka. Waxay soo saartaa.
Kaliya maahan inuu sii wado heerkan, Kanca wuxuu horumariyaa naftiisa iyada oo loo marayo dadaallada R & D ee joogtada ah oo waxay ku caddeysaa shahaadada Shirkadda 'Tedarikçi Best Aid' '(Q2009), oo laga soo qaatay Waddooyinka Waddooyinka Jarmalka (DB) tan iyo 1.
Shirkadda Hook waxay heshay macaamiil muhiim ah qeybta tareenka. Gaar ahaan meesha ay ku taal halka wax soo saarista xarigga loosoo gaabiyo, 20inkasta oo uu la kulmo. GermanyWaxaan ku faannay inaan aragno soosaarayaasha soosaarayaasha baararka shilalka gawaarida xamuulka ee lagu soo bandhigay bannaanka hore ee carwooyinka Innotrans ee Berlin.
Sannadkan, jillaabku wuxuu ku daray suumanka barnaamijkiisa wax soo saar ee wadooyinka. Bilaha soo socda, waaxdu waxay bilaabi doontaa inay u adeegto noocyada aasaasiga ah ee la codsaday. Diyaargarowga horudhaca ah ee jihadaan ayaa la soo gabagabeeyey oo wax soo saarista caaryada ayaa la bilaabay.
Intaa waxa u dheer, daraasadaha suurogalka ah ayaa la soo gabagabeeyey si loo helo Shahaadada Tijaabada Imtixaanka TSI Life ee alaabooyinka laga soo saaray waaxda tareenka oo wajigii codsigana la gaadhay.
Soosaarayaasha Dunida Ugu Horreeya Ee Soo Saara
Hook Inc. Waxaa loo aasaasay 1966 sidii ganacsi qoys. Tacliinta warshadaha waxay ku bilaabatay soo saarista jarjarida iyo dubbeyaasha, Istanbul Güneşli bilowga 1970 Shirkadda waxay u dhaqaaqday xarumihii ay ku laheyd Turkiga, been abuur, jirdil, timo iyo maqas birta wax soo saare ah waxayna sii wadday inay u furto suuqa Yurub. Hooks, 1980waxay bilaabeen inay siiso qaybo been abuur ah shirkadihii hormuudka ka ahaa qaybta baabuurta. Maalgashiga casriyeynta ee 1990 waxay ku sii wadday maalgashiga otomaatiga iyo robot-ka ee sannadihii 2000.
In Turkey, in in shirkadda qalabka gacanta ugu horeysay, iyadoo R & xarunta D, taas oo cadeeyay inuu yahay mid ka mid ah shirkadaha ugu horeeysa ee Hook qaybta, ee dalkeenna, in abuurna technology sidoo kale firsts badan, ayaa galay saaraha keentay abuurna dunida ee u dhexeeya.
Soosaarida qeybo ka mid ah xirmooyinka iyo ganaaxa, kuwaas oo loogu yeero qeybaha badbaadada qeybta gawaarida iyo iskuxirka wadaha nolosha, iyo alaabada sida crankshaft, piston rod iyo qeybaha mashiinka ee ku yaal wadnaha gaariga, iyo nidaamka shidaalka naaftada ee shaqeynaya cadaadis aad u sareeya; Waxay u adeegsaneysay soosaarayaasha gawaarida waaweyn iyo sumcadda sida BMW, Audi, Porsche, Bentley, VW, Ford, Fiat, Renault, Scania iyo hogaamiyaasha waxsoosaarka sida Bosch, Delphi, MTU, ZF, TRW. Sannadkii 2008 wixii ka dambeeyay, Kanca wuxuu keenay khibradda iyo aqoonta laga helay qaybta baabuurta ee qaybta tareennada wuxuuna noqday iibiyaha wadooyin badan oo tareennada Yurub ah, gaar ahaan dermuuska Jarmalka.
Shirkaddeenna, oo cusbooneysiisa isla markaana horumarisa lafteeda sannad kasta, ayaa u guurtay xarunteeda cusub ee ka shaqeysa 2004 gudaha 55,000 kun oo mitir laba jibaaran oo isku wareeg ah oo ku taal mitir laba jibaaran 25 oo ku yaal TOSB.
Kanca waxay leedahay laba hawlo wax soo saar oo waaweyn
Soosaarka qaybo been abuur ah, waxaan sidoo kale u adeegnaa qaybta baabuurta (rakaabka iyo gawaarida ganacsiga) iyo sidoo kale waaxaha kale sida tareennada, badda iyo mashiinnada culus. Waxaan u soo saarnay shirkadaha tareenka ee Jarmalka iyo shirkadaha ganacsiga ee u qaybiya waaxda wadooyinka tareenka ee Yurub. Ka sokow shahaadada HPQ ee ay u baahan tahay waaxda tareennada, waxaan sidoo kale helnay shahaadooyinka looga baahan yahay waaxda badda.
Ogeysiiska Qandaraaska: Qorista Qalabka Hookaha (TÜVASAŞ)
Ogeysiis Qandaraasle ah: Soo iibinta 2 Qalabka Xajmiga Xajmiga iyo Tifaftirka (TÜLOMSAŞ)
Ogeysiis Qandaraasle ah: Soo iibinta Sawirka Kala Duwan (TÜDEMSAŞ)
Ogeysiiska Qandaraaska: Sawir gacmeed (TÜVASAŞ)
Ogeysiiska Qandaraaska: Waxaa la geyn doonaa xakamaynta lafdhabarka iyo xirmooyinka (TÜDEMSAŞ)
Ogeysiiska Qandaraaska: Cerook waa la iibsan doonaa (TÜVASAŞ)
Ogeysiiska Qandaraaska: Sawir gacmeedka iyo gawaarida hoose ayaa la iibsan doonaa (TÜDEMSAŞ)
Bulgaariya oo loo yaqaan 'skier'
Hoteelada Palandokende ayaa soo jiidata
Sawir Frame Frame
sawir xirmo shaxda ah
Kaamirada Izmit Bay Crossing Price ayaa qiimeeya qiimaha ku salaysan 120 TL
Maanta taariikhda: 8 Maarso 2006 ee xaafadaha Ankara si ay u siiyaan 32 taxanaha xaafadaha